विशेष – Page4– Banking Khabar
बैंकिङ क्षेत्र तत्काल ‘बिग मर्जर’मा नजाने
बैंकिङ खबर । बैंकिङ क्षेत्रमा बिग मर्जरको विषय तत्काल नआउने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले अहिले नै बिग मर्जरमा जाने विषयमा केन्द्रीय बैंकले निर्णय नगरेको बताए । मिडिया इन्टरनेशनलद्धारा आयोजित एक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले …
बजेटबाट निराश अर्थतन्त्र : उज्यालो मौद्रिक नीतिको पर्खाइमा
समाचार टिप्पणी, बैंकिङ खबर/ पाँच बर्र्षे स्थायी सरकारको पहिलो बजेटपछि नेपाली अर्थतन्त्रमा केही निराशा छाएको छ । व्यबसायी, बैंकर, सहकारीकर्मी हरेक क्षेत्र निराशाजनक अवस्थामा छ । लगानीकर्ताहरुले खुलेर लगानी गर्न सकेका छैनन् । यत्ति मात्रै होइन नेपाली पुँजी नै बाहिरीने …
लघुवित्तको लाइसेन्स बन्द गर्नुपर्छ, अन्यथा मर्जरको समस्या आउन सक्छ
बैंकिङ खबर । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति अन्तिम चरणमा छ । मौद्रिक नीतिले केके विषय समेट्नुपर्छ भन्ने विषयमा सम्बन्धित क्षेत्रहरुले आआफ्नो राय दिइरहेका छन् । माइक्रोफाइनान्सको तर्फबाट भने व्याजदर क्यापकै विषय बारम्बार उठिरहेको छ । लघुवित्तहरुले मनपरी रुपमा व्याज लगाएर …
मौद्रिक नीतिको निर्माण : बिग मर्जरमा अन्यौलता
रुपा कोइराला/बैंकिङ खबर । राष्ट्र बैंक अब नयाँ मौद्रिक नीति ल्याउने तरखरमा छ । उक्त मौद्रिक नीतिमार्फत ‘विग मर्जर’ नीति ल्याउने राष्ट्र बैंकको तयारी छ । राष्ट्र बैंकले फोर्स मर्जरकै नीति अबलम्बन गरेर भएपनि वाणिज्य बैंकको संख्या १५।१६मा झार्ने भएको …
सुष्मा थापा /बैंकिङ खबर । डा. चिरंजीबि नेपाल गभर्नर बनेसँगै नेपालको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा निकै परिवर्तनहरु आएका छन् । २०७१ सालमा राष्ट्र बैंकको गभर्नर बनेका डा. नेपालले पहिलो मौद्रिक नीतिमार्फत नै बैंकिङ क्षेत्रका लागि थुप्रै सकारात्मक नीतिहरु ल्याए । …
बैंकिङ खबर । लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा सदुपयोग गरी उद्यमी बनेका थुप्रै उदाहरणहरु हामीमाझ छन् । विशेषगरी, महिलाहरुले लघुवित्तको कर्जा प्रयोग गरी आफ्नो जीवनस्तर उकास्ने मात्र नभएर छोराछोरीका लागि राम्रो शिक्षा र भविष्यका लागि आर्थिक जोहो गर्नेसम्मको हैसियत बनाएका …
महेन्द्रनगरमा वित्तीय जागरण : बैंकिङ कर्जाबाट उद्यमी बन्न आग्रह
बैंकिङ खबर । प्रदेश नं. ७ अन्तर्गत कञ्चनपूर जिल्लाको महेन्द्रनगरमा 'वित्तीय जागरण : राष्ट्रिय अभियान' सम्पन्न भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रवद्र्धन एवम् बीमा समितिसँगको सहकार्यमा मिडिया इन्टरनेशनलद्धारा आयोजित कार्यक्रममा बैंकिङ कर्जाको सदुपयोग गरी उद्यमशीलतातर्फ लाग्नुपर्ने 'आवश्यकता औँल्याइएको छ । …
बैंकर्स संघले तोड्यो व्याजदर सम्बन्धी डिसिजन
बैंकिङ खबर । नेपाल बैंकर्स संघका सदस्य बैंकहरुको बीचमा व्याजदर सम्बन्धमा भएको भद्र सहमति खारेज भएको छ । बैंकर्स संघले व्याजदर ११ प्रतिशतभन्दा माथि नलैजाने सम्झौता खारेज गरेको हो । यससँगै विभिन्न बैंकहरुले ११ प्रतिशतभन्दा बढी व्यादरमा निक्षेप योजनाहरु सार्वजनिक …
जति धेरै फाइनान्सियल लिटरेसी, त्यति धेरै विकास
रुपा कोइराला/बैंकिङ खबर । वित्तीय साक्षरता अर्थात फाइनान्सियल लिटरेसीलाई सामान्यतया बचत, लगानी र कर्जा लगायत विभिन्न पद्धतिका विषयमा जानकारी दिने शिक्षाको प्रकारको रुपमा बुझिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा वित्तीय साक्षरताको आवश्यकतालाई निकै महत्वपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । सरकारी तबरबाट पनि विगतदेखि …
सेयर बजारमा लाभकरको विवाद तत्कालका लागि सुल्झियो
बैंकिङ खबर । लाभकरको विषयलाई लिएर भएको विवादमा सरकार पछि हटेको छ । बोनस र हकप्रद सेयरमा पुरानै विधिबाट पुँजीगत लाभकर गणना गर्न अर्थमन्त्रालयले आन्तरिक राजश्व विभागलाई निर्देशन दिएको छ । बुधबार अर्थमन्त्रालयले तत्कालका लागि पुरानै विधिबाट कर गणना गर्न …
बजेट भाषणप्रति वित्तीय क्षेत्रको धारणा
बैंकिङ खबर । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरिएको बजेटप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ । बजेटका केही पक्षहरुलाई राम्रो मानिएको छ भने केही पक्षहरु सन्तोषजनक नभएको पनि बताइएको छ । बैंकिङ क्षेत्रले बजेटलाई सन्तोषजनक मानेका छन् । वृद्ध भत्ता नबढेको …
राम खत्री/बैंकिङ खबर । जातीय विभेदका घटना बढ्दै गइरहेका बेला कैलालीको गोदावरीका महिलाहरु भने विभेद विर्सिँदै आर्थिक उपार्जनमा जुटेका छन् । नगरका ३८० दलित महिला, १५० जनजाती सहित १ हजार ६०० महिलाहरु आवद्ध भएर सहकारी मार्फत आर्थिक उपार्जनमा जुटेका हुन् …
बैंकिङ पहुँच बढाइने, वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थित गरिने
बैंकिङ खबर । आर्थिक वर्ष २०७५।७६को बजेटले वित्तीय क्षेत्र लाई नौ बुँदामा समेटेको छ । धेरै पुँजी भएका निजी स्तरका कम्पनीलाई पुँजी बजारमा प्रवेश अनिवार्य गराइएको छ । बैंकिङ पहुँच विस्तार र हरेक नेपालीको बैंक खाता अभियानलाई पनि बजेटमा समावेश …
मौलाउँदै वित्तीय अपराध : हेर्नुहोस्, नक्कली नोटका गिरोहहरु
रुपा कोइराला/बैंकिङ खबर । पछिल्लो समय वित्तीय अपराध झन्झन् मौलाउँदै गएको छ । ठाउँठाउँमा नक्कली नोटका गिरोहहरु सल्बलाइरहेका छन् । दुःख गरेर पैसा कमाउनुभन्दा नक्कली नोटको कारोबार गरी सुखसयलको जीवन बिताउने मोहले धेरैलाई वित्तीय अपराधी बनाइरहेको छ । यसैबीच नेपाली …
लघुवित्तको कर्जा सदुपयोग गर्दा बनिन्छ उद्यमी, दुरुपयोगको नतिजा के हुन्छ ?
सुरेन्द्र भण्डारी – राममाया मध्यम बर्गीय परिवारकी व्यक्ति हुन् । धेरै नपढे पनि ३ कक्षा सम्म पढेकी राममायाको श्रीमान विदेशमा काम गर्छन् । राममाया भने एउटा सामान्य गृहिणी हुन् । एक दिन गाउमा एउटा लघुवित्त वित्तीय संस्था आयो । केहि काम …